Banyere Anyị - Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd.
Ngwa Mwepụ Ngwa Ngwa Nucleic Acid
Nchọpụta Acid Accle Acid
Nje influenza A/ B nje
Ọrịa AIDS & Nje ịba ọcha n'anya
Microorganism na -akpata ọrịa
PCR ezigbo oge PCR
Onye na -achọpụta PCR isothermal
Nchọpụta Nucleic Acid Nucleic Colorimetric
Ngwọta Nchọpụta Ọsọ
E guzobere Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. na Febụwarị 2019, nke dị na ụlọ ọrụ nyocha teknụzụ nke Qingdao High-tech Zone, Shandong Province ， Ọ bụ ụlọ ọrụ sayensị na teknụzụ na-elekwasị anya na R&D na mmepụta ngwaọrụ ahụike na Ogige POCT molekul.
Ejiri ụlọ ọrụ ahụ nwere ụlọ ọrụ nchacha ọkwa ọkwa 100,000 na akụrụngwa nyocha sayensị zuru ụwa ọnụ yana akụrụngwa mmepụta, yana nyocha ụlọ nyocha na mmepe na mmepụta mita 1,200.
Companylọ ọrụ ahụ nwere teknụzụ teknụzụ nchọpụta nucleic abụọ pụrụ iche (ikpo okwu nchọpụta nke Isothermal nucleic acid, ASEA nucleic acid ngwa ngwa nchọpụta) ， Ngwaahịa etolitere dabere na ikpo okwu a nwere njirimara nke ịdị mfe, ọsọ, nkọwapụta dị elu, na mmetụta dị elu. E tinyela ya nke ọma n'ọtụtụ ngalaba dịka ahụike ahụike, nchekwa nri, ọrịa anụmanụ na ihe ndị ọzọ.
Dabere na teknụzụ teknụzụ dị n'elu, anyị na-emepụta akụrụngwa nchọpụta nucleic acid aka nke na-adịghị adabere na akụrụngwa dị mgbagwoju anya, nke a na-atụ anya na a ga-etinye ya na nchọpụta ahụike ezinụlọ na ahịhịa ahịhịa n'ọdịnihu.
Ihe ọhụrụ achọrọ maka mgbochi na ịchịkwa ọrịa SARS-CoV-2 na ọnọdụ ụlọ ọrụ
Ka ntiwapụ zuru ụwa ọnụ na -aga n'ihu n'ihu, mgbochi na ịchịkwa ọrịa abanyela n'ọkwa nke ịhazi ihe.
Iji zaghachi ọnọdụ dị ugbu a nke ọma wee mezuo ihe achọrọ maka nnwale acid nucleic na ọnọdụ dị iche iche, ọ dị mkpa iji mee ngwa nyocha na mmepe na nhazi mmepụta, wepụta ngwaahịa agbakwunyere na ngwa ngwa dabara adaba maka nnwale saịtị, na melite ngwaahịa nnwale nucleic acid nke obodo m na sistemụ teknụzụ.
Na July 29, Premier Li Keqiang mere nnọkọ ndị isi nke Kansụl Steeti.
Nzukọ a rụtụrụ aka na ọ dị mkpa ịkpọkọta ndị otu niile iji mee ka mmepe na mwepụta ngwa ahịa dị obere oge, nwee mmetụta dị elu na ịrụ ọrụ dị mfe. Ndị ọrịa nọ n'ụlọọgwụ ahụ ọkụ, gbalịa ka ha belata mkpesa ahụ ruo awa anọ.
N'oge mgbụsị akwụkwọ ahụ SARS-CoV-2 ntiwapụ, ndị otu Jianma Gene Technology Co., Ltd. na Mahadum Sayensị na Nkà na ụzụ Qingdao na Mahadum Qingdao na -arụ ọrụ nyocha isi nsogbu, mepụta ngwaahịa nchọpụta nucleic acid, wee nweta nchọpụta n'ihe dị ka nkeji iri atọ.
Na Machị 13, 2020, ngwa COVID-19 nwetara asambodo EU CE; Na Mee, nwetara asambodo mbupụ nke onye nrụpụta nnwale nnwale ọhụrụ nke Ministry of Commerce nke China.
Igwe nlele nje virus nke otu ụlọ ọrụ anyị mepụtara na-ewe naanị nkeji 3 iji mezue nhazi nlele na mwepụ ngwa ngwa ugbu a, edechala na ntinye akwụkwọ nke ngwa ngwaọrụ ọgwụ Class Class.Ngwa ngwa ngwa nchọpụta ngwa ngwa acid nke ụlọ ọrụ mepụtara mebere oge nchọpụta nucleic acid na nkeji iri atọ, nke na -egbo mkpa mgbochi na njikwa ọrịa mba na mkpa ọha.Ka ọ dị ugbu a, ebupula ngwaahịa nnwale ngwa ngwa COVID-19 na Indonesia, Brazil na obodo ndị ọzọ, ndị ahịa achọpụtala ya.
Chọta anyị na SOCIAL MEDIA
Copyright - 2010-2020: Ikike niile echekwabara. Ngwa nnwale China, Staphylococcus Aureus Nucleic Acid, Canine Parvovirus (Cp), Kit na-enweghị mgbakwunye,